China Ibhakede Elevator Ukwakha futhi Factory | I-Chinatown
Ikheshi lethu le-premium TDTG yebhakede lingenye yezixazululo zokonga kakhulu ukuphatha imikhiqizo eyimbudumbudu noma eyimpuphu. Amabhakede agxiliwe emabhande abheke phezulu ukuze adlulise impahla. Izinto zokwenziwa zifakwa emshinini kusuka phansi bese zikhishwa phezulu.
Singumhlinzeki wemishini ohambisa okusanhlamvu oqeqeshiwe. Ikheshi lethu le-premium TDTG yebhakede lingenye yezixazululo zokonga kakhulu ukuphatha imikhiqizo eyimbudumbudu noma eyimpuphu. Amabhakede agxiliwe emabhande abheke phezulu ukuze adlulise impahla. Izinto zokwenziwa zifakwa emshinini kusuka phansi bese zikhishwa phezulu.
Le mishini yochungechunge iza nomthamo omkhulu we-1600m3 / h. Isetshenziswa kakhulu ohlelweni lokugcina ukolweni, irayisi, imbewu yezitshalo zikawoyela, nokunye okunye okusanhlamvu. Ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa futhi njengomshini wokucubungula okusanhlamvu kwemboni yefulawa, imboni yelayisi, ifektri yefolishi, njalonjalo.
1.Lifti yokusanhlamvu ingakugwema ngokufanele ukuqoqwa kwemikhiqizo, inciphise ubungozi bokuqhekeka futhi iqale ngokushelela ibhakede ligcwele futhi ibhuthi i-1/3 igcwele okusanhlamvu. Ikheshi lamabhakede lingasebenza ngokuqhubekayo ngaphansi kwesimo esigcwele sokulayisha.
2. Izingxenye zekhanda nezama-boot zomshini zihlehliseka ngokuphelele futhi zifakwe amapuleti e-buffer amelana nokugqoka angashintsha.
3. Iminyango yokuhlola iyatholakala ezinhlangothini zombili zekhanda nezingxenye zebhuthi.
4. Amabhande anezingqimba okungenani ezintathu zenjoloba enenayiloni kodwa futhi ancike emandleni nasekuphakameni kwekheshi.
5. I-casings ye-elevator yebhakede ifakwe ngokuxhuma kwe-flange nama-gaskets enjoloba, futhi inokunemba okuhle kakhulu nokunemba.
6. Wonke ama-pulleys alinganiswe ngokwezibalo nangamandla, futhi ambozwe ngenjoloba ukumelana okuphezulu ngaphandle kwesilayidi.
7. Amabheringi e-pulley awohlobo lwemigqa eyindilinga eyisiyingi yokuziqondanisa. Ziboshwe ngothuli futhi zibekwe ngaphandle kwekesi.
8. Uhlelo lokuthatha lutholakala engxenyeni ebhuthini ye-elevator yebhakede.
9. Sisebenzisa ibhokisi lezimpahla ezisezingeni eliphakeme kanye nemoto yegiya. Ibhokisi lamagiya lohlobo lwe-bevelled liza namazinyo aqinile futhi lifakwe ngokuphelele, kuyilapho inqubo yokwenziwa kothambisa uwoyela yamukelwa. Ibhokisi lamagiya laseJalimane SEW liyatholakala ukuhlangabezana nezidingo ezikhethekile zamakhasimende.
10. Isethi ephelele yunithi yezokuphepha yenzelwe ikheshi lethu lamabhakede. Shaft pulley shaft ngayinye ifakwe inzwa yejubane futhi inyunithi yangemuva ifakwa ukuvikela ibhande ukuthi lingawi emuva uma kwenzeka ugesi uphela.
11. Amabhakede ensimbi noma amabhakede e-polymeric ayatholakala.
Thayipha Transmission kwesilinganiselo Ijubane (m / s) Umthamo (t / h)
Ufulawa Ukolweni Ufulawa (r = 0.43) Ukolweni (r = 0.75)
I-TDTG26 / 13 9-23 0.8-1.2 1.2-2.2 1.2-2 6.5-9.5
I-TDTG36 / 13 9-23 1.2-1.6 1.6-3 2-3 8-12
I-TDTG50 / 24 11-29 1.3-1.8 1.7-3.4 8-12 30-50
Umjikelezo we-Round Link Chain
Isango lesilayidi elenziwa ngesandla kanye ne-Pneumatic